Top5Best value-for-money Smart Phones you can choose under 2Lakh MMK – SUNNY Tech News
Posted byDaxDo 13th Nov 2020 22nd Nov 2020 Posted inUncategorized
ဈေနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန် သုံးချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုဖုန်းမျိုးကို ရွေးချယ်သင့်လဲ?
Facebook သုံးဖို့၊ Game ဆော့ဖို့အတွက်အဆင်ပြေပြီး ဓာတ်ပုံရုပ်ထွက်လည်းအတော်အသင့်ကောင်းတဲ့ ဘတ်ဂျက်ဖုန်းတွေကို အခုနောက်ပိုင်း ဈေးကွက်ထဲမှာလူကြိုက်များလာကြပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ဖုန်းဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေသူတွေအတွက် (2) သိန်းအောက် ရရှိနိုင်မယ့် Mid-range Phone (5) လုံး အကြောင်းကိုပြောပြချင်ပါတယ်။
(1). Samsung A11 (6.4-inch screen )
၂သိန်းမကျော်ပေမယ့် Snapdragon 450 Processor ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး screen size6လက်မ ကျော်အောင်ထုတ်လုပ်ထားတာကတော့ တကယ်မိုက်ပါတယ်။ ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ Punch-hole selfie camera အပြင် Back Camera (3) လုံးမှာလဲ ultra wide camera ပါထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ USB Type-C ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Fingerprint sensor လည်းပါဝင်ပါတယ်။
Samsung A11 ဖုန်းတွေကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ ဒီလခ့်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(2). Redmi9(6.53 inch screen )
SOC ပိုင်းမှာ Snapdragon 665 ထက်စွမ်းဆောင်ရည်ပိုကောင်းတဲ့ Helio G80 (12nm) ကိုအသုံးပြု ပေးထားပါတယ်။ Back Camera4လုံးပါဝင်ပြီး Display အနေနဲ့ 6.53 လက်မ, Full HD + (IPS LCD ), 1080P + ထိပါပါတယ်။ Battery ပိုင်းမှာဆိုရင် 5020Mah ကို 18W fast charging လည်း ထည့်သွင်းပေးထားတဲ့အပြင် Fingerprint sensor လည်းပါဝင်ပါတယ်။
Redmi9ဖုန်းတွေကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ ဒီလခ့်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(3). Redmi note 8 (6.3-inch screen )
ခုလို budget phone တစ်လုံးမှာ Great feature camera4လုံးထိထည့်ပေးထားတာတော့ သဘောကျစရာပါ။ SOC ပိုင်းမှာလဲ Snapdragon 665 ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး 6.3 လက်မ screen size ကိုမှ Gorilla Glass နဲ့ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။ နောက် cover ကိုလည်း Glass သုံးပေးထားပြီးတော့ 4000Mah battery,18W fast charging နဲ့အတူ Design အနေနဲ့ပါမိုက်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံး ဖြစ်ပါတယ်။
Redmi note 8 ဖုန်းတွေကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ ဒီလခ့်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(4). Huawei Y6P (6.3-inch screen )
ဒီလိုဘတ်ဂျက်ဖုန်းမျိုးမှာ 5000Mah Battery ကိုထည့်ပေးထားပြီးတော့ reverse charging feature လဲပါတဲ့အတွက် ဖုန်းကို power bank အနေနဲ့လဲအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ ၂သိန်းအောက်ဖုန်းတစ်လုံး မှာ RAM 4GB ပါတာဆိုတော့ secondary phone တစ်လုံးအနေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
Huawei Y6P ဖုန်းတွေကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ ဒီလခ့်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
(5). Vivo Y11 (6.3-inch screen )
6.35 လက်မ screen size ကို HD+ resolution ပါတဲ့ Display နဲ့သုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ RAM3GB, ROM 32 GB အပြင် 439 Qualcomm Snapdragon chipset ကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။ Dual Rear camera နဲ့အတူ LED flash လည်းပါဝင်ပါသေးတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ 5000Mah battery ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်တဲ့အပြင် ဖုန်းအနောက်ဘက်မှာ Rear-Mounted Fingerprint Sensor ပါ ထည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ သူ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆို အတော်လေးသုံးပျော်တဲ့ဖုန်းပါ။
Vivo Y11 ဖုန်းတွေကို အတန်ဆုံးစျေးနှုန်းတွေနဲ့ ဒီလခ့်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အမိုက်စား ‘GAMING LAPTOP’ များ